The Wild Toro Slots Bonus will immediately enliven up your mood with a very cartoon like set-up of a small town in Spain, kukho randomly ibekwe ooronta kunye nabantu ukuzulazula kuloo imvelaphi izithende. Umxholo kumngxunyana isekelwe yenkomo-ukulwa umdlalo othandwa of Spain apho matador ulwa ngenkunzi yenkomo enkulu. Ngoko ke sekwadlula kangangokuba amaxesha amaninzi le matador ilawula ukuba yabongamela yenkomo okanye usekela-uhlobo, Ukubhatalwa ukufumana yongezwe KDE. Umfutho amazwi abantu zicwangciswa ngasemva ukuba ndininike va idolophu exakekileyo.
Malunga Developer of Wild Toro Slots
Elk Studios yenye yezo developers ngubani likwazile ukwenza uphawu kwi imboni yezemidlalo kunye imidlalo ezifana Bloopers kunye Azisekho Wild Toro. Umphuhlisi liqalise imisebenzi yayo iminyaka emine emva kwaye lihambise ngempumelelo 8 imidlalo kube manje. Le nkampani uza inkqubela domain ujonge ngokukhawuleza kakhulu umgangatho Ukudlala zinika.
Uluhlu ukubheja iwela phakathi 0.20 kule game wekhasino online. Iintsika zika-kwiindawo zokubeka Wild Toro ezikhethekileyo kakhulu. Wena leorenji zakhutshwa ngemela phakathi, imbali, i fan Beje ebomvu kunye 3 zemali ezahlukeneyo isilivere negolide, nobhedu. Ngoko kukho uphawu lasendle Wild Toro ebhalwe itsheke ngombala omthubi ibekwe kuzo kwisithuba bayotywe. Le uwasasaze le matador nomsindo nge Mthovu encinane. Ke akukho, kanjalo, zasendle ehamba somdlalo nto leyo yenkomo nomsindo iimpondo namazinyo ezinkulu smiling kwi kuwe. Roses isivuno wena xabiso liphezulu 1,000 iikhredithi ilandelwa yi orange ngemela nge 500 zemali. Nazi 178 paylines ukuba uwine.
Uphawu Wild uthatha yonke into ngaphandle ukuba usichithachithe ukwenza eliphumelelayo ezihamba kuwe. A payline kunye neesimboli Wild luyagwagwisa inkokhelo eliphezulu. Uphawu Wild Toro ibonakala kuphela esondweni wesihlanu. Inkunzi yasendle isebenza Wild Ukuhamba ngokubhekiswa tye kuzo nge spin ngalinye. Njengoko ihamba, itshintsha zonke Matadors ukuya usendle uze luhlala njengoko Wild kwi esondweni lokuqala. Ukufumana 3 Matadors phezu ukugcina Owesibini, Isithathu, kunye ekwazi yesine akhawunti ukuba simahla re spin-. I Matadors banamathele kwiindawo zabo kwaye ijikelezisa extra unyuka omnye matador livela kwi reel.
Wild Toro kwiindawo zokubeka i umdlalo amangalisayo online ukuze abadlali nje ufuna laze nge slot yekhasino, kwaye andifuni ukudlala omnye oluyingozi. elk studio, umphuhlisi iye ngokwenene bachukunyiswa kunye umdlalo kumngxunyana.